`C-Festival 2018´ ပွဲအတွက် သံတမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ `MONSTA X´
ယနေ့ April လ၁၀ရက်နေ့မှာ ခန့်ညားချောမောလှပတဲ့ကောင်လေးခုနှစ်ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Kpop Boy Group လေး `MONSTA X´ အဖွဲ့လေးဟာ `C-Festival 2018´ ပွဲအတွက်သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ရှင်။
A post shared by OFFICIAL MONSTA X (@official_monsta_x) on Dec 2, 2017 at 7:02am PST
`C-Festival´ ဆိုတာကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ `COEX´ မှာကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ `Urban Culture Playground´ ပွဲလေးတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ `C-Festival´ ပွဲလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက်ရည်မှန်းချက်တွေကို အမှန်တကယ်ဖြစ်မြောက်လာနိုင်စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
`C-Festival´ ကို ယခင်နှစ်တွေက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Kpop Idol တွေဖြစ်တဲ့ `Exo´ နဲ့ `Seventeen´ အဖွဲ့တွေက သံတမန်အဖြစ်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာလို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်။ `C-Festival´ ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့အနေနဲ့ `MONSTA X´ Kpop အဖွဲ့လေးကို သံတမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က `MONSTA X´ အဖွဲ့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမကပဲ ကမ္ဘာတဝန်းက နိုင်ငံအတော်များများမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတာကြောင့့်လို့သိရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ `MONSTA X´ ရဲ့ Fanbase အင်အားက အံ့မခန်းဖြစ်လောက်အောင်ကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး သူတို့အားလုံးဟာ ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အထတွေရဲ့ Icon လေးတွေအဖြစ်နဲ့ အရမ်းကို Popular ဖြစ်တာကြောင့်လို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ `MONSTA X´ အဖွဲ့လေးက `C-festival´ ပွဲတွေရဲ့ Promotion ပွဲတွေကို အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တာကြောင့်ဆိုပြီး `C-Festival´ ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ဖြေကြားထားခဲ့ပါတယ်။
A post shared by OFFICIAL MONSTA X (@official_monsta_x) on May 20, 2017 at 10:33pm PDT
`MONSTA X´ အဖွဲ့လေးကသံတမန်အဖြစ်နဲ့ ခုလာမယ့် မေလ၂ရက်နေ့မှာ `C-Festival 2018´ ရဲ့ပထမဦးဆုံး Promotion ပွဲလေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ `C-Festival´ နဲ့ `MONSTA X´ တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ့် Project တွေများစွာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုအသိပေးပြောကြားရင်း…. ကဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ `MONSTA X´ Kpop အဖွဲ့လေးကို ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ကြပါဦးနော်…။?
PREVIOUS POST Previous post: Hacker တွေရဲ့ သွေးတိုးစမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Despacito
NEXT POST Next post: လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်အောင် ပရိတ်သတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အကြီးအကျယ် ရရှိနေတဲ့ Selena နဲ့ Justin တို့ရဲ့ relationship